किन लगभग पुरै स्कूल बसहरू पहेलो मात्र हुन्छन ? के खतरा बाट बच्न हो, हेर्नुहोस र थाहापाउनुहोस | Khabar Sadan खबर सदन
Home अर्थ किन लगभग पुरै स्कूल बसहरू पहेलो मात्र हुन्छन ? के खतरा बाट...
किन लगभग पुरै स्कूल बसहरू पहेलो मात्र हुन्छन ? के खतरा बाट बच्न हो, हेर्नुहोस र थाहापाउनुहोस
रंगहरू दैनिक जीवनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्। तरंगदैर्ध्य र रंग को आवृत्तिले यसको जीवन र मानव जीवनमा यसको प्रयोग परिभाषित गर्दछ। उदाहरण को लागी, किन रातो ट्राफिक बत्तीमा खतरा वा रोक्न संकेतको लागि प्रयोग गरिन्छ, किन आकाश नीलो देखिन्छ र किन स्कूल बसहरू पहेँलो हुन्छन्।
किन स्कूल बसहरू पहेलो मात्र चित्रित छन्?
स्कूल बसहरू चित्रित गर्न प्रयोग गर्नुको कारण माथिको अनुच्छेदमा पहिल्यै संकेत गरिएको छ तर हामी अझै यसलाई डिकोड गर्छौं यदि तपाईंले यो गुमाउनु भयो भने।
तरंगदैर्ध्य र फ्रिक्वेन्सीको खेल
रातो रको सेता प्रकाशको विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको बीच अधिकतम तरंगदैर्ध्य (लगभग ६५० एनएम) हुन्छ। यो निलो रंग जस्तो बिखेरदैन (जसको तुलनात्मक रूपमा कम तरंगदैर्मा छ र यसले अधिकतम फैलिन्छ र आकाशमा नीलो रंग दिन्छ), र यसरी खतरा दर्शाउन र सिग्नल रोक्न प्रयोग गरियो किनकि यो टाढाबाट देखिन सकिन्छ।
पहेलो रंग रातो रंगको मुनि रहेको छ र रातो भन्दा कम तरंगदैर्खे छ तर निलो भन्दा ठुलो रूपमा एक्रोनिम बाट बुझ्न सकिन्छ।
तर किन स्कूल बसमा पहेलो रंग?
जे होस् रातो रंगले धेरै ध्यानाकर्षण गर्‍यो, यो पहिले नै खतरा हो भनेर चिनाइएको छ त्यसैले अर्को सबैभन्दा चौकस रंग, जुन भीडमा चिन्न सकिन्छ, पहेंलो स्कुल बसमा चित्रित गरिएको छ।
पहेंलो रंग पनि वर्षा, कुहिर र शीतमा पनि देख्न सकिन्छ। किनकि पहेंलो बाह्य परिधीय दर्शन रातो रंग भन्दा १.२४ गुणा बढी छ, यो रातो भन्दा पनि बढी देखिने छ।
एक व्यक्ति सीधा नदेखी पनि, ऊ उसको अगाडि पहेलो रंगको स्कूल बस भेट्टाउन सक्छ। यसैले हाइवेमा केटाकेटीले भरिएको बसको लागि दुर्घटनाको सम्भावना कम गर्न स्कूल बसलाई पहेंलो रंग्दछ।
Previous articleके तपाईंले आफ्नो कुहिनोलाई जिब्रोले छुन वा चाट्न सक्नुहुन्छ, किन सकिन्न वा अरुनै तरिका, जन्नुहोस
Next articleआज हेर्नुहोस कस्तो छ तपाईंको भाग्य र पाथिभरा माताको दर्शन गरौ, आज – १६ आषाढ २०७८ बुधवारको राशिफल हेर्नुहोस